Waa maxay maalin! | Martech Zone
Waa maxay maalin!
Talaado, Juun 13, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Gabadhayda ayaa i soo wacday maanta ka dib markii ay ka heshay xirmo boostada Jones Soda. Shirkadani waa mid cajiib ah! Mahadsanid shaqada aan ku qabtay caado Muusigeyga Jones Maqaarka MP3 player, Jones wuxuu diray xirmo mahadsanid. Cajiib! Waxay ka koobnayd dhididka, qaar ka mid ah istiikarada wax lagu shiido, qaar ka mid ah istiikarada kale, furaha furaha, bushimaha la mariyo, iyo biinanka !!! Ma dhihi karo wax ku filan oo ku saabsan shirkaddan. Si aad uga baxdo jidkooda sidaas oo kale runtii wax badan ayay sheegaysaa. Cab Jones Soda !!!
Marka waxaan u maleynayay in taasi runtii sameysay maalintayda… laakiin waxay ahayd uun bilowga.
Aniga oo ku socda baabuurkeyga, nin ayaa igu soo istaagay aniga oo dhiig ka baxaya dhinaca midig oo hoos u dhigaya gaabnihiisa si aad ah. Wuxuu ii sheegay in toorey la galiyay. Waxaan dul dhigay laamiga, shaatidiisana waan la soo baxay. Wuxuu dhiig ka daadanayay 2 dhaawac oo mindi ah oo ka soo gaadhay dhiniciisa. Ma haynin wax aan ku qabsado, markaa waxaan ku riixay dhaawacyada hal gacan oo mid kalena waxaan ugu yeedhay booliska. Wuxuu kujiray xoogaa xanuun waxaana yaraaday dhiig. Shaqaalaha caafimaadka ayaa yimid waxaana loola cararay isbitaalka. Waxaan hayey dhiniciisa 20 daqiiqo oo fiican oo dhiiga ayaa inta badan istaagay. Qof ayaa maro nadiif ah iga siiyay maqaayada.
Kalkaaliyaha caafimaad ayaa booliska u sheegay inuu haysto 50/50 fursad uu ku maro. Ninka magaciisa waxaa la oran jiray Dale wuuna jiray 52. ​​Waqtiga aan nadiifinayay, waxaan u maleynayaa in booliisku lahaa 2 markhaati oo arkay tooreynta oo ay heleen mindi. Ma aqaan sida loo ogaado haddii Dale sameeyey, in kastoo. U ducee Dale.
Marka… maxaa maalin ah! Runtii aad ayaan ugu mahad naqayaa inaan goobta saxda ah ku sugnaa waqtiga saxda ah. Waxaa jiray 1 nin oo kale oo ila joogay aniga oo haysta Dale dhiniciisa iyo adeege i siisay marada nadiifka ah. Taasi waa wax yar oo carqalad ku ah geeska mashquulka badan ee Indianapolis. Waxaan ku lugeeyaa waddadaas maalin kasta baabuurkayga iyo ka dib.
U ducee Dale!
Cusboonaysiinta: Waa tan Warbixinta Booliska.
Joornaal qiimihiisu yahay $ 14.99